Maalinta Xasaasiga ah ee Gaadiidka Dadweynaha oo Berri Caadi ah! | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulMaalinta Xasaasiga ah ee Gaadiidka Dadweynaha ee Caadiga ah Berrito!
Maalinta Xasaasiga ah ee Gaadiidka Dadweynaha ee Caadiga ah Berrito!
10 / 05 / 2020 34 Istanbul, GUUD, WADADA, Nidaamyada Tire Wheels, Headline, Gobolka Marmara, Metrobus, TURKEY
maalin muhiim ah berrito ee gaadiidka dadweynaha oo caadi ah
Iyada oo la adeegsanayo la dagaallanka Coronavirus, ayaa talaabooyin caadi ah laga qaadayaa meelaha qaarkood ilaa berri. Muuqaalka koowaad ee tan waxaa la saadaalinayaa inuu khibrad u leeyahay gaadiidka dadweynaha. Sababta oo ah dhammaan xayiraadaha saaran gaadiidka dadweynaha ayaa sii socda Isniinta, Meey 11, in kasta oo IMM ay awoodeeda siisay 100 boqolkiiba, waxaa jiri kara dhibaatooyin. IMM waxay digniin u dirtay dadka reer Istanbul si ay ula kulmaan dhibaatooyinkaas heerka ugu hooseeya. Digniinta IMM-da waxaa ka mid ah ka fogaanshaha saacadaha ugu sarreeya ee gaadiidka dadweynaha, ka fogaanshaha fuulista maaskaro, iyo joogteynta fogaanta bulshada.
Laga bilaabo Maajo 19, xeerar cusub ayaa laga sameeyay xayiraadaha lagu isticmaalay tallaabooyinka coronavirus (Covid-11). Sababtoo ah xaqiiqda ah in ganacsiyo badan ay mar kale bilaabi doonaan bilowga jadwalka taariikhda caadiga ah, koror aad u weyn oo ku saabsan adeegsiga gawaarida khaaska ah laakiin tan ugu muhiimsan ee gaadiidka dadweynaha ayaa laga filayaa Istanbul. Dowladda Hoose ee Magaalada Istanbul (IMM) ayaa uga digtay dadka degan magaalada Istanbul iyaga oo xusuusinaya in xayiraado aan caadi aheyn oo lagu saarayo gaadiidka dadweynaha ay sii socdaan. Wadaagista xogta 8 milyan 1 kun ee rakaabka ah ee gaadiidka dadweynaha Jimcaha, Maajo 336, IMM waxay go'aamisay in gaadiidka ugu badan ee dadweynaha la isticmaali jiray illaa iyo 20-kii Maarso, markaasoo la qaaday tallaabooyin adag oo muwaadiniinta lagu raacay go'doomin bulsho. Iyada oo sharraxaysa inay ku shaqeyn doonto boqolkiiba 100 awoodda Isniinta, IMM waxay ku casuuntay qof walba inuu ilaaliyo caafimaadkiisa isagoo gurigiisa jooga intii suurtogal ah sababa la xiriira joogitaanka faafa.
LACAG LA'AANTA LACAG-LA'AAN
İBB waxay xasuusisay in cudurka faafa si dhaqso ah oo fudud ugu fidayo gaadiidleyda dadweynaha, wuxuuna tilmaamay cinwaanada soo socda, isagoo saadaaliyay in isticmaalka gaadiidka dadweynaha uu waxbadan kusoo kordhin doono gawaarida cusub ee la bilaabayo Isniinta, May 11:
“Cudurka faafa weli waa socdaa, fadlan ha ka bixin guriga haddii aysan qasab ahayn.
Haddii ay suurtagal tahay, doorbid in aad lugeeysid ama aad fuusho baaskiil halkii aad isticmaali lahayd gaadiidka dadweynaha.
Haddii ay tahay inaad isticmaasho gaadiidka dadweynaha, isticmaal gaadiid dowladeed kahor saacadaha ugu sarreeya laakiin wixii ka dambeeya 10:00 fiidkii iyo ka hor 16:00 fiidkii.
Ka ilaali masaafadaada ugu yaraan 1-2 mitir meelaha joogsiga basaska, saldhigyada metro.
Waa reebban tahay in lagu raaco gaadiidka dadweynaha bilaa maski. Sidoo kale, ka taxaddar inaadan taaban dusha sare, tareennada jaranjarada ku shaqeeya, gacanta ku haysa gaadiidka dadweynaha.
Fadlan ku dheji maaskaro iyo galoofyada aad u isticmaasho bacda qashinka. Gacmahaaga ha saarin wejigaaga hana dhaqin gacmahaaga ka dib markaad isticmaasho gaadiidka dadweynaha. ”
MAYA NORMALIZATION, MAYA MACLUUMAAD CUSUB OO KU SAABSAN GANACSIGA MASS
sharaxaad IBB by Wasiirka Caafimaadka Fahrettin ninkeeda sidoo kale hoosta ka xariiqay cilada ah ee Istanbul ee Turkey, tusay ee xarunta of dillaacay Board Science IMM wadaago views uu ku saabsan arrintan. Isagoo ku nuuxnuuxsanaya in Guddigu rumeysan yahay in xorriyadda laga bilaabo 11ka Maajo ay tahay furitaan hore, IMM waxay carrabka ku adkeysay inaysan jirin qawaaniin cusub oo ku saabsan gaadiidka dadweynaha inta aan la qaadin tillaabooyin caadi ah.
100 DADKU WAA ROOX KARI KARAA 25 Qof
İBB waxay sheegtey sababta oo ah xanibaadaha gaadiidka dadweynaha ee socda, kala bar tirada kuraasta ayaa loo qaadi karaa basaska iyo tareennada, iyo nus tirada rakaabka fadhiya. Tani waxay ka dhigan tahay in bas ka kooban 100 qof uu qaadi karo qiyaastii 25 qof, iyo tareenka 600 oo tareenka qaada oo qaadi kara 300 oo qof.
Isagoo ogaanaya in qaar ka mid ah waqtiyada sugitaanka rakaabku ay ku kordhin karaan joogsiyada Isniinta, IMM waxay ugu yeertay qofkasta inuu u dulqaato inuu sugo ilaa gaari cusub oo madhan uu imaanayo.
WUXUU KA SHAQEEYAA MACLUUMAADKA SHAQADA
Qoraalka IMM, qodobbada soo socda ayaa la adkeeyay: “Waxaan jeclaan lahayn in aan tilmaano in dhammaan adeegyada gaadiidka dadweynaha ee Istanbul ay ku shaqeyn doonaan boqolkiiba 11 awoodda Isniinta, May 100. Si kastaba ha noqotee, waa iska cadahay inay jiri doonaan dhibaatooyin sababo la xiriira xaddidida gaadiidka rakaabka. Qorshahan cusub, waxaa la go’aamiyay in tagaasida ganacsiga ay qaadan doonaan 3 rakaab ah. Taas macnaheedu waa; 2 qof, oo uu ku jiro darawalka, ayaa ku safri kara 4 mitir oo laba jibbaaran. Si kastaba ha noqotee, sii daynta noocan ahi wali kuma bilaaban gaadiidka dadweynaha. ”
ILAALI CAAFIMAADKAAGA DADKAAGA GURIGA
“Munaasabaddan, qaar ka mid ah rakaabkeenna qiimaha badan ayaa la kulmi kara dhibaateyn sababihii aannaan ku haysan gaadiidka dadweynaha Isniinta iyo kadib. Waxaan jeclaan lahayn inaan u tilmaanno dadkeenna qaaliga ah in halista faafidda cudurku ay sii socoto oo fadlan ilaali caafimaadkaaga adigoo guriga jooga intii suurtagal ah. ”
Taariikhda Taariikhda Gaadiidka Dadweynaha ee Ciidanka Xooga
Adana Gaadiidka Dadwaynaha ee xilliga cusub
Nidaamka Cusub ee Awoodda leh ee Gaadiidka Dadweynaha iyo Trolleybus
Bursa waxay u dhaqaaqdaa Nidaamka Smart Stop ee Gaadiidka Dadweynaha
Tababbarka gaadiidka dadweynaha waa waajib
Dhaqdhaqaaqa weyn ee gaadiidka dadweynaha ee Kayseri
Natiijada nolosha iyo qanacsanaanta ee gaadiidka dadweynaha 2013
Revolution in gaadiidka dadweynaha GPS iyo Camera ka soo, sidaas Maxay Taas micnaheedu?
Rajada AVM ee gaadiidka dadweynaha
Kayseri Usuly Metrobüs ee Gaadiidka Dadweynaha
Shaqadii cusboonaysiinta ayaa ka sii socota Saldhigga Baska ee Magaalada Istanbul
Turkey AVM Markii aan la Dhaqanka hor imanaya?
Nidaamka Bedelka wuxuu bilaabmayaa Kahramanmaraş
Burulaş ayaa ka qaybgalay Shirkii Dib-u-habaynta ee Gaadiidka Dadweynaha